Qaxootiga xeryaha dhadhaab ee Kenya oo diidan in ay si iskood ah ugu noqdaan gudaha Soomaaliya – Radio Daljir
Qaxootiga xeryaha dhadhaab ee Kenya oo diidan in ay si iskood ah ugu noqdaan gudaha Soomaaliya
Nofeembar 19, 2013 7:39 b 0
Dadhaab, November 19, 2013 – Qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa la oggaaday in aysan ogolayn in ay dib ugu laabtaan dalkooda, kadib heshiiskii dowladdaha Kenya iyo Soomaaliya iyo hay?ada UNHCR ay ku gaareen Nairobi horaantii bishaan.
BBC ayaa xog ay arruurisay ku oggaatay in dadka xeryaha degan aysan doonayn in ay ku noqdaan Soomaaliya, cabashada ugu badan ee ka imanaysa Soomaalida dhadhaab ayaa ah in aysan helayn meel amaan ah iyo nolol.
Ku dhowaad 100 ruux ayaa qorshaynaya in ay ku noqdaan Soomaaliya, sida lagu sheegay xogta BBC-da
Heshiiskii UNHCR iyo labbada dal ee Soomaaliya iyo Kenya, waxaa uu dhigayey in aan la qasbin dadka Soomaalida qaxootiga ku ah dhadhaab, Kenya ayaa ku andacoonaysa in xaalado amni ay ka jiraan dalkeedda.
Kenya in kastoo ay heshiiska saxiixday lama ogga habka ay ula dhaqmi doonto dadka qaxootiga ah ee xeryaha dhadhaab, kuwaas oo ku mayal adag in ay sii joogaan xeryaha qaxootiga aduunka.
In ka badan Nus-milyan ruux oo qaxooti ah ayaa la sheegaa in ay joogaan Dhadhaab, dadka ugu badanna waa Soomaali ka carartay dagaaladii 1991 ilaa dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobollada Koonfureed ee dalka Soomaaliya.
Guddiga difaaca baarlamanka Kenya ayaa dhadhaab ku tilmaamay meel marin u ah Al-shabaab oo laga soo abbaabulo weerarada, taas oo dhaawacday degannaanta Soomaalida xeryaha ka hor heshiiskii Nairobi.
Puntland oo arruurinaysa saamaynta ay masiibadu ku reebtay kalluumaysatada xeebaha (Dhegeyso)